Mufananidzo wekutanga weinofungidzirwa iPhone 7 Pro uye mamwe maviri | IPhone nhau
Chekutanga mifananidzo inoratidza matatu (anofungidzirwa) iPhone 7 mamodheru pamwechete: iPhone 7 Pro, iPhone 7 Plus uye iyo "yakajairwa"
(Alleged) kuvuza kunoramba kuchioneka nezve Apple inotevera smartphone. Kusvika parizvino, angangoita runyerekupe akavimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus ichave iri yepamusoro modhi, iyo inosvika neayo maviri kamera uye Smart Connector. Vamwe vaongorori vagara vachitaura kuti muna 2017 tichaona matatu mamodheru e iPhone: iyo 3-inch iPhone 7 uye yakanyanya kushomeka pane ese, iyo iPhone 4.7 Plus ine 7-inch screen uye iyo iPhone 7 Pro, yemhando mbiri kamera modhi ine smart chinongedzo chakaunzwa neApple padivi peiyo Pro Pro munaGunyana 2015.
Nguva pfupi yapfuura ruzivo kubva kune vaongorori, runyerekupe rwakavimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus ichave iri yepamusoro modhi, asi kwave kune zvakare runyerekupe runyerekupe rwakaenderera mberi kubheja pane iyo iPhone 7. Pro. vakaonekwa paWeibo, iyo «Chinese Twitter», mifananidzo miviri inoratidza vanopomedzerwa matatu mamodheru iyo Apple ichauya inotevera Gunyana. Asi pane chimwe chinhu mumufananidzo unotevera chinoita kuti tifunge.
Ko iyo iPhone 7 Pro inozosvika pakupedzisira kana kwete?
Gore rapera, Apple yakaunza diki diki mune iyo iPhone 6s: kusiyanisa iyo 2014 modhi kubva muna 2015 modhi, vakafunga kuwedzera a "S" pasi peshoko "iPhone" kuseri kwechigadzirwa. Iine "S" modhi yakavhurwa muna 2015, ndeipi pfungwa yekuti iyo iPhone 7 inoratidzwa zvakare ne "S" kumashure? Kana isu tichifunga nezvazvo, uye sekureba sekunge iyi mifananidzo yaive yechokwadi, tinogona kungofunga kuti izvo zvavachazopa gore rino hazvizodaidzwe "iPhone 7", asi ichave yekuvandudza yeiyo iPhone 6s, ndokuti, zvatichaona munaGunyana Ichave iri "iPhone 6Ss".
Ini pachangu, ini ndiri wekufunga kuti ivo ndivo "S" mhando dzinosanganisira zvimwe zvitsva zvinonakidza Semuenzaniso, iyo ID yekubata uye makumi matanhatu neshanu muiyo iPhone 64s kana iyo 5D Kubata, iyo 3Mpx uye chizvarwa chechipiri cheizvo zvataurwa pamusoro ID muiyo iPhone 12s. Isu tinorangarirawo kuti iyo iPhone 6S yaisanganisira 4% kamera iri nani pane iyo iPhone 60 uye Siri. Izvi zvinoreva kuti kana Apple ikafunga kuvhura "S" vhezheni mushure meiyo modhi yaive yatove "S", tinogona kungofunga kuti ichasanganisira hukuru hwemukati hwekuvandudza. Izvo zvakapesana ndizvo zvingave zvinoshungurudza zvikuru kubvira (kwandiri) iyo iPhone 5.
Nezve izvi zvatsanangurwa, isu tinofanirwa kutaura nezve makamera eaya anofungidzirwa kuti iPhone 7: iwo akajairwa uye Plus mamodheru anosvika aine kamera hombe pane iyo iripo muiyo iPhone 6s, saka, kana runyerekupe rwuri rwechokwadi, ivo vese vanogona kuve neumwe 21Mpx kamera. Ipapo isu tine iyo iPhone 7 Pro iyo inosanganisira iyo mbiri kamera ye, maererano nerunyerekupe, 12 + 12Mpx. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuona iyo Smart Connector iyo inobvumidza iyo yepamusoro mhando kushandisa zvishandiso zvisingawanikwe kune mamwe maviri mamodheru.
Chero zvazvingaitika, "kubuda" uku hakuna kusiyana kubva kune chero chimwe uye isu tinofanirwa kudaro tirambe tisina chokwadi kusvika muna Gunyana. Pachezvangu, zvinoita kunge hazvibudirire kuvhura mamodheru maviri akadzika zvakanyanya kupfuura kumusoro kweiyo renji. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Chekutanga mifananidzo inoratidza matatu (anofungidzirwa) iPhone 7 mamodheru pamwechete: iPhone 7 Pro, iPhone 7 Plus uye iyo "yakajairwa"
Zvinotyisa zvitatu kushayikwa kwekuravira kwakanaka, avo vanamuenzi veApple vasingaremekedze uye vasingateerere vatengi vavo vanofanira kutarisa kune avo maartist anogadzira izvo prototypes zvekuburitswa kwemaPhones anotevera.
Mufananidzo uyu WEMAHARA chaizvo, asi izvo hazvireve kuti iwo zvirongwa zveApple zveiyo inotevera iPhone
Iyo Pokémon Go gwara, matipi uye madiki ekuti uvabate vese (1/2)